Shiinaha Adag Adag Nooca Nooca Nooca V Nooca W Nooca M Nooca Rubber Fender Strip warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Haohang
Nooc Adag oo Adag Nooca Nooca V Nooca W Nooca M Nooca Rubber Fender Strip
Qaab hal qaab leh oo cufan muddo dheer oo adeeg nolol Wanaagsan xiirid xiirid Cadaadis taabasho hoos u hooseeya Nidaam qumman oo xoog leh, si dhakhso ah oo sahlan loo rakibo dherer aan caadi ahayn, Tilmaamaha Tamarta iyo dhamaadka muuqaalka la heli karo ee tamar qaadashada Xoogga Falcelinta Yar.
M Nooca Fender Rubber W Noocyada wax lagu duubo ee Maraakiibta Badda Dabaqyada Rubber
M Nooca Rubber Fenders waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qaansada ama gadaal doonyaha ama geesaha dekkada ama pontoons. Qaab dhismeedka 'M' ee dusha sare ee lebiska wuxuu siiyaa dabacsanaan sidaa darteedna wuxuu si fudud ula socon karaa dusha qaansada Noocan feerka leh wuxuu leeyahay dusha xiriir oo ballaadhan oo jilicsan. Goobaha dushooda kore waxay bixiyaan xajin dheeri ah iyo seddex lugood oo jilicsan si loo hubiyo xiriir wanaagsan iyo isku xirnaan adag. Faraajooyinka M waxaa lagu dhejin karaa gacan yar oo weyna ka fudud yihiin dabaqadaha W. Saddexda dalool ee sii kordhaya ee F gawaadhida M fududeeya rakibidda fudud oo sax ah.
M Nooca Rubber Fenders ayaa sidoo kale loo isticmaalaa riixitaanka. Waxay bixiyaan weji fidsan oo ballaaran oo loogu talagalay cadaadiska qulqulaya oo aad u hooseeya - waxtar leh markaad la shaqeyneyso maraakiibta jilicsan sida booyadaha iyo kuwa sida bulk. Muuqaalka jeexjeexan wuxuu siinayaa qabasho dheeri ah iyo M Fender-ka oo si sahal ah loogu dhejin karo qaybaha tooska ah iyo raadiyeyaasha yar yar ee qaansada iyo dhinacyada dambe ee jiidashada
Mashiinnada M ayaa laga soo saaray nooc caag ah oo aad u adkeysi badan. Dhererku badanaa kama badna 2000 mm waxaana lagu soo saaraa iyadoo la adeegsanayo isku-xoqid Qiyaasaha ugu caansan waxaa lagu hayaa keydka sidaas darteed waxaa lagu geyn karaa ogeysiis gaaban. Feerayaasha M, W dabaqyada iyo Furayaasha godadka Keyhole lama beddeli karo.
Farsameeyayaasha M way fududahay in la rakibo. Kordhinta badanaa waxay ku dhacdaa iyadoo laga caawinayo hagaajinta biinanka illaa saddexda furitaan ee caadiga ah. Fidiyaha M waxaa lagu heli karaa dherer kala duwan waxaana lagu jari karaa xagal. Haddii fallaadhihii ay ka dheer yihiin hal mitir waxaa lagu dari karaa furitaanka xarigga taageerada.
Wax taaj oo kale oo ruxrux ah oo cimri dherer ah
Caabbinta xiirid wanaagsan
Cadaadiska xiriirka hoose
Qabanqaabinta qumman ee adag, dhakhso badan oo fudud si loo rakibo
Dhererka aan caadiga ahayn, Tusmada Tamarta iyo muuqaalka dhammaadka ee la heli karo
Nuugista tamarta sare
Xoog falcelin yar.
Iyada oo qaab-dhismeed caqli gal ah, u fududahay rakibidda iyo dayactirka.
Codsiga M ama V ama W Nooca Rubber Fenders
M ama V ama W Nooca Rubber Fenders ayaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo:
• doonyaha shaqada
• keena doonyo
• geesaha quays
• qaybaha buundada
Q1. Waa maxay shuruudahaaga xirxirida?
J: Guud ahaan, waxaan ku xirnaa alaabteena gudaha bacda caaga ah iyo kartoonada dibedda. Haddii aad sharci ahaan u diiwaangashan tahay,
alaabta ayaan ku rakibeynaa sanduuqyadaada calaamadeysan ka dib markaan helno waraaqahaaga oggolaanshaha.
Q2. Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
J: badanaa haddii amarka lacagtu ka yar yahay $ 1,000, loo baahan yahay inuu bixiyo lacag buuxda intaan la soo saarin, haddii ay ka badan tahay $ 1,000, u baahan tahay in T / T 30% deebaaji ahaan, iyo 70% kahor dhalmada. Waxaan ku tusi doonaa sawirrada alaabta iyo baakadaha, oo kugu filan inaad ku ilaaliso alaabadaada qulqulka, mahadsanid! intaadan bixin dheelitirka.
Q3aad. Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU et .etc, waxa ugu weyn ee looga baahan yahay macaamiisha, mahadsanid!
Q4. Sidee ku saabsan waqtiga dhalmadaada?
J: Guud ahaan, waxay qaadan doontaa 10 illaa 20 maalmood kadib helitaanka lacagtaada hormariska ah. Waqtiga bixinta gaarka ah waxay kuxirantahay waxyaabaha iyo tirada dalabkaaga.
Q5. Ma ku soo saari kartaa sida ku cad shaybaarka?
J: Haa, waxaan ku soo saari karnaa shaybaaradaada ama sawir gacmeedyadaada. Waxaan dhisi karnaa caaryada iyo isku dhejiska.
Q6. Waa maxay siyaasadaada muunadaadu?
J: Waxaan bixin karnaa muunad bilaash ah haddii aan heysano qaybo diyaar ah oo keyd ah, laakiin macaamiisha waxay u baahan yihiin inay bixiyaan kharashka dirista. Mahadsanid aad fahamka.
Q7. Ma tijaabisaa alaabadaada oo dhan ka hor intaadan umulin?
J: Haa, waxaan haysanaa 100% tijaabo kahor dhalmada, ilaali qallinka, ha walwelin!
Q8: Sideed uga dhigeysaa ganacsigeena mid waara iyo xiriir wanaagsan?
J: 1. Waxaan haynaa tayo wanaagsan iyo qiimo tartan si loo hubiyo in macaamiisheena ka faa'iideystaan;
2. Waxaan u ixtiraameynaa macmiil kasta sida saaxiibkeen oo waxaan si kal iyo laab ah ula ganacsadaa oo aan la saaxiibo meel kasta oo ay ka yimaadaan.
Hore: Maqaarka Polyurea EVA xumbo Buuxin Donut Fender
Xiga: Monopile sabayn Polyurethane EVA Donut Fender
Maraakiibta Tec, Fender Rubber, Shiinaha Rubber Fender, Barkinta Hawada Badda, Boorsada Hawada ee Markabka, Block isku dhafan,